Esi emezi nkewa zip faịlụ? - DataNumen
Olee otú ịmata ma gị ngwaahịa nwere ike ịrụzi / naghachi m rụrụ arụ faịlụ?
Emechara m rụzie faịlụ m na ngwaahịa gị, why?
Achọtara m ahụhụ nke ngwaahịa gị. Ihe a ga-eme?
Olee otú lelee ma ọ bụrụ na m faịlụ bụ recoverable site onwe m?
My faịlụ dị n'ofe mgbake. Gịnị bụ ihe ikpeazụ m ga-eme?
Achọrọ m atụmatụ adịghị na ngwaahịa gị. Ihe a ga-eme?
Kedu otu esi edozi njehie "Ekekọrịta mmebi iwu"?
Ogwe ọganihu anaghị agbanwe agbanwe (ma ọ bụ jiri nwayọọ nwayọọ gbanwee) na mmemme ahụ ga-akpụkọta. Ihe a ga-eme?
Achọrọ m iwepụ usoro ngosi ahụ tupu ịwụnye ụdị zuru ezu?
Esi ewepu ngwanrọ gị?
Kedu ihe dị iche na ụdịdị demo na nke zuru ya?
Enwere m ike ahu nagide ofu faịlụ site na ngosi version, mgbe na-full version?
Kedu ihe m kwesịrị ịme mgbe m mechara nweta mbipute zuru ezu?
Enwere m ike iji ngwanrọ gị rụzie faịlụ Mac rụrụ arụ?
Nchịkọta zuru ezu ọ ga-agbake karịa data karịa ụdị ngosi?
Ogologo oge ole ka ọ ga-ewe maka mmemme gị iji rụzie faịlụ m?
Olee otu iji kwalite ngwaahịa m?
Faịlụ m abanyelarị.zip ma ọ bụ.rar usoro Olee otú mpikota onu na encrypt ya ọzọ na WinZip ma ọ bụ merieRAR?
Ihe omume gị ọ na-arụ ọrụ na MacOS?
Enwere m ike iwepụta ebe nchekwa data edoziri na usoro 95/97?
DataNumen Outlook Repair/ Mgbake Mgbanwe
Enwere m njehie "Site na ncheta" mgbe m na-arụzi PST /OST faịlụ. Ihe a ga-eme?
Kedu ihe kpatara na enweghị m ike ịchọta ozi email ndị achọrọ ma ọ bụ ihe ndị ọzọ dị na faịlụ PST ahụ?
Enwere ụfọdụ ihe achọghị na faịlụ PST edoziri. Esi ewepu ha?
Ana m ahazi ụgbọala m. Enwere m ike nwetaghachi data Outlook m?
Gini mere aru nke ufodu ozi ndi agbaghaghari efu?
Kedu ihe dị iche n’etiti DataNumen Outlook Repair na DataNumen Outlook Drive Recovery?
Kedu ihe dị iche n’etiti DataNumen Outlook Repair na DataNumen Exchange Recovery?
Kedu ihe kpatara okwuntughe natara dị iche na nke m setịpụrụ?
Esi emezi nkewa zip faịlụ?
Etu esi emezi ihe zip faịlụ?
Kedu ihe pụtara inwetaghachi ọnọdụ na akụkọ ngosi ahụ?
Kedu ihe kpatara ọtụtụ mpaghara ụbọchị na nchekwa data arụziri arụnyere na 1900-01-01?
Kedu ihe kpatara na m enweghị ike imeghe ofu DBF faịlụ?
M mmepụta oyiri oyiyi nke m C: mbanye. Olee otu iji weghachi ya?
Etu esi bulie onyonyo nke DataNumen Disk Image
Etu esi edozi ụdị ngwaahịa zuru ezu?
Kedu ihe ga - eme ma m zipụ iwu ahụ?
Enwere m ụtụ isi. Gbanyụọ ụtụ isi maka iwu m
You na-enye mwelata ego?
Etu esi akwụghachi usoro m?
Akwụkwọ ikike a ọ na-adịgide?
Kọmputa ole ka m nwere ike iwunye ngwaahịa gị?
Enwere m ike ịnyefe ikike site na kọmputa gaa na nke ọzọ?
Kedu ka esi gbanyụọ ikike?
Enwere m ajụjụ / nsogbu gbasara otu n'ime isiokwu blog gị. Ihe a ga-eme?
Nwere ike tinye backlink na weebụsaịtị m?
Iji rụkwaa nkewa zip faịlụ (iche na aha faịlụ ahụ bụ 'mysplit.zip'), biko mee ihe ndị a:
1. download DataNumen File Splitter wee wụnye ya na kọmputa gị.
3. Pịa bọtịnụ “Jikọọ”.
4. Na mkparịta ụka "Jikọọ", họrọ faịlụ niile kewara wee tinye ha na ndepụta faịlụ isi.
5. Gbaa mbọ hụ n’usoro akụkụ ahụ dị na nke mbụ ha, ya bụ, mysplit.z01 bụ nke 1 na mysplit.z02 bụ nke abụọ, wdg na mysplit.zip bụ nke ikpeazụ.
Jiri bọtịnụ "Move Up" na "Move Down" iji dozie usoro ha ma ọ bụrụ na ọ dị mkpa. Ọ bụrụ na otu akụkụ efunahụ ma ọ bụ mebie, mgbe ahụ ị nwere ike ileghara ya anya, mana ị ka kwesịrị idebe usoro ha. Dịka ọmụmaatụ, ọ bụrụ na agbaghara akụkụ 2, wee hụ na akụkụ dị na listi ahụ bụ mysplit.z01, mysplit.z03,…, mysplit.zip.
6. Nịm aha faịlụ ebe aga, dị ka mysplit_merged.zip
7. Pịa “Start Sonyere ”isonye akụkụ n'ime ebe faịlụ mysplit_merged.zip.
8. Mgbe sonyere usoro agwụla, ị nwere ike start DataNumen Zip Repair na rụkwaa mysplit_merged.zip dị ka nkịtị zip faịlụ. Faịlụ edozi ga-enwe data nke akụkụ niile nke gbawara Zip faịlụ. Nwere ike imeghe ya na ewu ewu Zip ụlọ ọrụ, dị ka WinZip, MmeriRAR, Wdg
iso, zip file
Kekọrịta edemede a:
Ka rapaara? Kedu ka anyị ga - esi nyere aka?
Olee otu anyi ga esi nyere aka?
Emelitere na May 17, 2021